पीएसजीले गर्ने भयो नेयमारलाई कारबाही ! - हाम्रो देश
पीएसजीले गर्ने भयो नेयमारलाई कारबाही !
काठमाडौं । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले स्ट्राइकर नेयमारलाई कारबाही गर्ने भएको छ ।
अभ्यासमा नआउने बारे नेयमारले क्लबमा कुनै जानकारी नगराएको भन्दै पीएसजी कारबाही गर्ने तयारीमा पुगेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पिएसजीका खेल निर्देशक लियोनार्दोले एक अन्तर्वार्तामा नेयमारले पिएसजी छोड्न सक्ने बताएका छन् ।
नेयमार कोपा अमेरिका फुटबल सुरु हुनुभन्दा केही दिनअघि घाइते भएपछि ब्राजिलको टिममा पनि उनी परेनन् । कहिले घाइते त कहिले विभिन्न लफडामा पर्ने गरेका नेयमारको पछिल्लो गतिविधिबाट क्लब रुष्ट हुदै आएको छ ।
नेयमारलाई पीएसजीले दुई वर्षअघि बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा भित्राएको थियो । नेयमारले पीएसजीका लागि ३७ खेलमा ३४ गोल गरेका छन् । तर हाल नेयमार पुनः बार्सिलोना फर्किन चाहेका समाचारहरु प्रकाशमा आइरहेका छन् ।